'VersaKeyboard' ilay tranga izay mitondra ny zavatra ilainao rehetra amin'ny iPad Air | Vaovao IPhone
Ny Noely dia fotoana iray hanomezana kojakoja ho an'ny iDevices na ny Mac's. Ny kojakoja kintana dia tsy isalasalana fa ny tranga fiarovana ho an'ny fitaovana, ary raha miresaka momba ny iPad isika dia maro no mahita keyboard ho toy ny fitaovana tsara. IPad iray misy klavie amin'ny farany dia ahafahantsika manatanteraka asa maivana amin'ny birao ary hampandeha antsika tsy hanana solosaina amin'ny fotoana maro.
Androany izahay no mitondra anao a fonony izay ho hitantsika amin'ny taona ho avy (mahaliana, tsy ho ela ...) ary izany dia manolotra antsika mazava tsara izay efa noresahintsika teo aloha: fonony io ary kitendry. Ok, misy kojakoja maro mitovy fiasa, fa ny VersaKeyboard dia iray amin'ireo 'rehetra amin'ny 1' tsara indrindra hitanay ...
VersaKeyboard Izany dia fonony fitendry izay ho hitantsika amin'ny telovolana voalohany amin'ity 2014 ho avy ity, kojakoja novokarin'ny marika Moshi, iray amin'ireo mpanamboatra kojakoja tsara indrindra ho an'ny Apple eran'izao tontolo izao.
Una tranga natao hanampiana fiarovana lehibe amin'ny fitaovantsika amin'ny endrika ultra Slim, zavatra iray izay hahatonga ny iPad Air zahay tsy hahazo tavy loatra. Vita amin'ny polycarbonate ary, araka ny hitanao amin'ny sary etsy ambony, manafina keyboard keyboard feno ho an'ny iPad Air-tsika ny tranga.
Ny zavatra tena mahaliana amin'ity raharaha ity dia ilay ampahany manarona ny efijery an'ny iPad Air aforeto amin'ny fomba 'Origami' hitazona ny iPad Air toy ny hoe sarin-tsary, na ny tena izy, fanaraha-maso solosaina.
Ny VersaKeyboard koa tohano ny torimaso sy ny torimaso amin'ny iPad rehetra hahafahanao mamoha ny fitaovanao (na manidy azy) amin'ny fanokafana na fanidiana ny sarony fotsiny.
El Ohatra rehefa niresaka izahay dia ampiasao ny teknolojia Bluetooth manolotra anay 130 ora amin'ny batterie, Ary mba hampihenana ny hatevin'ny tranga iray manontolo dia tsy maintsy holazainay fa ity dia iray amin'ireo kitendry manify indrindra hitanay.
Azo antoka fa ho a safidy tsara ho an'ny taona ho avy 2014 ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Air » 'VersaKeyboard' ny tranga izay mitondra ny zavatra ilainao amin'ny iPad Air
iH8sn0w sy Winocm dia mampiseho jailbreak tsy mitambatra amin'ny iOS 6.1.3 sy 6.1.4